DAY DAYO GAYAANKAA: Man City oo koox cusub raadso ku tiri Samir Nasri – Gool FM
DAY DAYO GAYAANKAA: Man City oo koox cusub raadso ku tiri Samir Nasri
Byare March 27, 2017
(Manchester) 27 Mar 2017. Man City ayaa la warinayaa inay xiddigeeda Samir Nasri ku war galisay inuu raadsado koox cusub.
Warsidaha Goal ayaa fahansan inay soo idlaatay waayaha Nasri ee garoonka Etihad Stadium isl markaana aysan u badnayn inuu si joogta ah ugu biiro naadiga Sevilla.
Laacibka reer France ayaa iminka heshiis amaah ah ugu jooga kooxda Seville ee dalka Spain laakiin uma badna inay si toos ah u wada iibsan doonaan.
Guardiola ayaa tababar gooni ah u diray Nasri markii uu qabtay xilka Man City isagoo ku sheegay inuu cayil koray, laakiin wuxuu hor istaagay in la iibiyo.
Yeelkeede, Nasri ayaa la warinayaa iminka inuusan ka soo muuqan doonin qorshaha Man City ee kal ciyaareedka soo socda. Waxaana isniintii la sheegay inuu iibiyay gurigiisii raaxda ee ku yiilay Cheshire.
Naadiga Seville ee uu iminka amaahda ku joogo ayaa heysata dookh ay ku iibsan karto laacibka adduun dhan 25-milyan oo euro, laakiin uma badna heshiis joogta ah uu ku sii joogi doono gegada Ramon Sanchez Pizjuan iyadoo ay jirto rabitaankiisa ku aadan inuu la sii joogo.
Kooxda reer Spain ayay ku adkaan doontaa inay lacagahaasi ku soo iibsato waxaana taa dheer mushaarkiisa 7-milyan oo euro.
Seydou Keita oo ka dalbaday ciyaartoyda Barcelona ku guulaysiga 3-koob xiliciyaareed kan
Madaxwaynaha Bayern Munich oo sheegay in Ancelotti ay ka go'antahay inuu reebo Real Madrid